musha More Boxers Bio Deontay Wilder Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Childhood Biography inopa Nyaya Yakazara yeAmerican Boxer ine zita remadunhurirwa “Bhomba Bhomba”.
Yedu vhezheni yeDeontay Wilder's Biography Chokwadi, kusanganisira yake Yehudiki Nyaya, inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Deontay Wilder Biography - Kubva paMakore ake ekutanga kusvika panguva yeMukurumbira.
Ongororo yeDeontay Wilder's Bio inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira uye kusimuka kune mukurumbira nyaya.
Zvikuru, nhoroondo yaWilder's Dating, hupenyu hwepamoyo, chokwadi chemhuri, mararamiro uye zvimwe zvidiki-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe weakareba-anotonga pasirese heavyweight shasha.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveDeontay Wilder's biography, iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwe ado, ngatitangei.
Deontay Wilder Upenyu hwepakutanga uye Mhuri Yemashure:
Kune Biography kutanga, Deontay Leshun Wilder akazvarwa musi we 22nd waGumiguru 1985 kuTuscaloosa muAlabama, US.
Deontay Wilder aive mumwe wevana vana vakazvarwa naamai vake, Deborah Wilder uye kuna baba vake, Gary Wilder. Tarisai, mumwe wevabereki vaDeontay Wilder.
Sangana naDeborah Wilder. Ndiye amai vaDeontay Wilder.
Deontay Wilder Mhuri Kwakabva uye Kumashure:
Nyika yeAmerica yerudzi rweBlack ine midzi yeAfro-American akarererwa kwaakaberekerwa muTuscaloosa, Alabama, kwaakakurira pamwe chete nemukoma anozivikanwa - Marsellos nehanzvadzi nhatu vanoramba vachidzivirira hupenyu hwavo hwepachivande bhandi remakwikwi.
Kukura muTuscaloosa, Young Wilder aive chikamu cheyakazara nhamba yevechidiki avo vaishushikana neAmerican nhabvu uye vaitamba basketball semumwe mutambo wevacheche mutambo.
Kunyange zvazvo aifarira kuona tsiva paTV, aisaona ramangwana rekurohwa kumeso.
Deontay Wilder Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Wilder aipinda Tuscaloosa Central High School mutaundi raanogara. Ndichiri pachinzvimbo ichi, Wilder akatumira simba rake rekumhanyisa simba uye achikwira murefu mukutamba nhabvu yeAmerica nebasketball sekudzvinyirira uye kutadza.
Paakapedza chikoro kuCentral High School, Wilder akawana mvumo kuShelton State Community College, kwaakazosiya chikoro mushure mekuziva kuti akange asara nemwedzi mishoma kuti ave baba.
Kuve baba vaishanda nesimba uye vane mutoro, baba vaWilder vakashanda mashoma kupfuura mabasa e3 uye vakaita danho rekugamuchira mbichana semutambo wetsiva nekuti vaitenda kuti kupinda mukati mechirongo kunogona kuita kuti mvura inaye zvakanyanya kupfuura kunaya kwemvura muAmazon.
Deontay Wilder Yekutanga Yekuchengetedza Hupenyu Chokwadi:
Nekudaro, Wilder akapinda mune yega Gym kuTuscaloosa kwaakasangana nemurairidzi Jay Deas, murume uyo paakatarisa paWilder, akashungurudzika nebasa rekuveza mutambi kubva mudura re6-7 tsoka ye 19-gore. anowana basa anowana mari.
Mushure mekupfuura nemavhiki mashoma ekubudirira kudhiraivha, Wilder akagogodza pasi pro panguva yesangano rekuregeredza panzvimbo yekurovedza muviri, chiitiko chakazivisa chishuwo chisingadzorwi chemutambo wetsiva wekukurumidza kuenda pro.
Nekudaro, Deas akaita kuti Wilder atevedze maitiro akakodzera nekumunyoresa ku 'Skyy Boxing Gym' kuNorthport, Alabama, kwaakarwa ari mumakwikwi eamateur aine shuviro yekuenda kumaOlympics.
Deontay Wilder Biography - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Wilder akakurumidza kuona kuti tsiva yaida zvinopfuura kungogogodza pro imwe panzvimbo yekurovedza muviri.
Kunyangwe hazvo Wilder akaunganidza nhoroondo inoshamisa yemakumi matatu nemashanu kusvika makumi mashanu uye achikwanisa kumaOlimpiki a30, kutadza kwemutambo wetsiva kumisikidza Clemente Russo weItari muma semi fainari emutambo wepasirese, yakadzika seimwe yenguva dzakaomesesa dze rake rekutanga basa.
Kunyangwe zvakadaro, akawana menduru yendarira uye akavhenekesa hafu yekunyemwerera kwekunyepedzera kuviga kuora mwoyo kwake.
Achienderera mberi, Wilder akatendeuka nyanzvi mushure mekuwanikwa akafanirwa nekurova uye hunhu.
Akaita debut yake ari 23-year-okuberekwa paVanderbilt University Memorial Gymnasium muNashville, Tennessee, kwaakakunda Ethan Cox katatu mumutambo wechipiri kusati kwambomiswa.
Panguva iyo Wilder aipembera mukufara kwekukunda kwake kwekutanga, kumira kusina ropa kwaive kwekuodza mwoyo kwevatori venhau vemitambo vaive vatotora mifananidzo inotyisa.
Deontay Wilder Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Nyanzvi mushure mehunyanzvi, mutambi wetsiva wese akatarisana naWilder akawana mugove wavo wakanaka wehasha iye achinyemwerera pamatanho ake akakwana.
Pamusoro wepamusoro pekukwira kwake kusingadzongonyedzwi, Wilder akakunda Kelvin Mutengo uyo asina kurohwa muna Zvita 2012 kuhwina mukombe weWBC Continental Americaas heavyweight ndokuenderera mberi nekuwedzera zita reWBC rinorema kuunganidzwa kwake nekurova Bermane Stiverne muna Ndira 2015.
Achimhanyisa kumberi kusvika parizvino, Wilder anoverengerwa seyepasi rese-anoshanda anorema uye ane anoshamisa nyanzvi tsiva rekodhi ye41-0-1 nekukunda kwake kwazvino kuve kugogodza kwehunyanzvi kweDominic Breazeale muna Chivabvu 2019. Vamwe vese, sekutaura kwavo , inhoroondo.
Deontay Mhepo Hukama Hupenyu:
Kutanga, Deontay Wilder akamboroora naamai vevana vake vekutanga vana - Jessica Scales.
Chavo kwaive kudanana kwakatanga boxer asati afunga yekugamuchira mutambo unobhadharisa waanotonga panguva yekunyora.
Vasati vasunga banga muna2009, vaviri vakaparadzana ava vaive nemwana wavo wekutanga Naieya.
Aive mwanasikana akaropafadzwa uyo ane nguva yekuzvitakura pamwe nekuzvarwa kwake zvakaita kuti Deontay atore tsiva zvakasimba kuitira kuti awane mari yaidiwa pakuvhiyiwa kuti agadzirise hurema hwake husati hwazvarwa hunozivikanwa se. spina bifida.
Nhasi, Naieya ane hutano uye anotamba chinzvimbo chehanzvadzi hombe kuvanun'una vake vatatu venyama Ava, Deontay Jr naDereon.
Deontay naJessica vakarambana mushure mekunge varoorana kwemakore masere. Neaimbove achifamba muhukama hweveruzhinji neyechokwadi nyeredzi yeterevhizheni, Telli Swift.
Iwo shiri dzerudo dzainzi dziri kufambidzana kubvira 2015 dzakapfimbwa uye dzine mwanasikana pamwe chete - Kaorii Lee (akaberekwa Kurume 2011).
SaWilder, Telli akange akaroora uye ane mwanakomana - Kerron nemurume wake wekare. Aive modhi asati ave nyeredzi chaiyo uye akabatsira kuseta iyo Bhokiseni WAGS Association kubatsira vana nemhuri.
Deontay Hupenyu Hwemhuri Hupenyu:
Kusiyana nevakawanda nyanzvi yemabhokisi, Wilder ndeyepakati kirasi uye isiri-isina basa yemhuri kumashure. Isu tino dissect maficha ehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaDeontay Wilder:
Gary ndibaba vaWilder. Akatonga pamusoro penyaya dzemhuri semunhu anoranga, achiisa muWilder tsika yekushanda nesimba uye kukunda pamusoro pevamwe vezera.
Wilder akakurira mune izvo uye anotora anogara achitsigira Gary semunhu akasimba muhupenyu hwake.
Nezve amai vaDeontay Wilder:
Deborah ndiamai vaWilder. Akabatsira kusimudza mutambi wetsiva kusvikira ave zera 17 uye akaona kuti kuenda kuchechi vhiki nevhiki kwaive chikamu chakakura chekurerwa kwake.
Amai vevashanu vanotsigira sarudzo yaWilder yebasa uye vanokoshesa chokwadi chekuti shasha inorema pasi rose inoshanda nesimba kushanda sekurudziro kuvazhinji.
Nezve hama dzaDeontay Wilder:
Wilder ane vatatu vakura vanozivikanwa vakuru uye masosi semwana wechipiri. Mubhokisi wetsiva anozivikanwa chete munin'ina wake Marsellos uyo anosarudzawo kuita basa kunze kwetsiva.
Kunyangwe haisati yabudirira saWilder, Marsellos ari kukwira kuburikidza nematanho haamire chero chinhu kusvikira ave wechipiri "Wilder world champ".
Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvevamwe vemhuri yaWilder. Kusanganisira sekuru nasekuru naamai vake pamwe nasekuru namaiguru.
Saizvozvowo, hama dzemubati wetsiva, vazukuru uye babamunini havana kubatwa muwebhu yehunyanzvi hweruzivo.
Deontay Wilder Hupenyu Hwako:
Wilder ane yakasarudzika mhando yehunhu inoita kuti arove vazhinji sejongwe. Zvisinei, kuva jongwe rudzi rwakakosha rwekuvimba. Chimwe chinhu chakauya kure kuti chigadzirwe semutambi wetsiva.
Uye zvakare, Wilder anoratidza Libra Zodiac hunhu hwekuda, basa uye kushanda nesimba. Iye zvakare haana matambudziko nekuburitsa pachena nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika kuzivisa uye kukurudzira.
Taura zvinofarirwa nemutambi wetsiva nezvaanofarira, zvinosanganisira kutamba basketball. Zvakare, kuenderana neAmerican nhabvu, kuita, kuona mafirimu. Zvekare, kayaking uye kupedza nguva neshamwari dzake nemhuri.
Deontay Wilder Hupenyu:
Wilder ane mari inofungidzirwa kuti inodarika emadhora makumi maviri emadhora panguva yekunyora. Matunhu epfuma yake inoyevedza anotora kwaakabva kumamirioni emadhora aanoenda nawo kumba mushure mekukunda kurwa.
Saka nekudaro, humbozha hausi mutorwa kune mutambi wetsiva. Murume anoziva kushandisa uye kuisa mari muzvinhu zvakakosha. Sekuwana nzvimbo dzinodhura kusvika kumamiriyoni emadhora.
Chinozikanwa pakati pezvinhu zvakasarudzika nzvimbo yake yekugara yeTuscaloosa ine dzimba dze Deluxe uye zvekunze maficha.
Imba inoshandawo senzvimbo yekupaka yekuunganidza mota dzeWilders. Muunganidzwa unozvikudza unotasva kunge hombe simbi Hummer. Iyo grey negoridhe inoshandurwa Lamborghini, uye inoshandurwa Rolls Royce.
Deontay Wilder Untold Chokwadi:
Kugumisa yedu Deontay Wilder yehucheche biography, hezvino chokwadi chisinga taurike. Kuti hauna kumboziva nezvake.
Nezve Deontay Wilder Nickname:
Wilder akatora zita rake remadunhurirwa rekuti "Bhomba reBhuronzi" mushure mekuhwina menduru yebronze muma2008 Olimpiki.
Akagadzira zvakare "Bomber" chinongedzo mushure memhare muhondo weAmerican heavyweight boxer - Joe Louis uyo akatumidzwa zita rekuti "The Brown Bomber".
Deontay Wilder Chitendero:
Wilder akazvarwa uye akarerwa semuKristu. Achiri kuita chiKristu uye anobvuma kuti Mwari anokosha zvikuru muupenyu hwake.
Kunyanya zvakadaro, iye anoridza pachidanho chekuti vanhu vatende mune zvisingaonekwe kushungurudza kuti izvo zvakakosha zvehupenyu senge mweya nerudo hazvioneke.
Deontay Wilder Tattoos:
Mutambi wetsiva ane akati wandei ma tattoo anotaura nyaya yehupenyu hwake. Nekudaro, hapana magumo mukuona kune huwandu hwemuviri arts Wilder anogona kuva nayo. Sezvo anoramba achiwana zviitiko zvitsva zvehupenyu nezuva.
Thanks for reading vedu Deontay Wilder Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinovavarira kurongeka uye kururamisira patinenge tichiendesa Biography yeBoxers.